फेरि अचानक लक्ष्मी गदाल रुँ,दै मिडियामा,अब के होला ? - समृद्ध नेपाल
काठमाडौँ । लक्ष्मी गदाल र सामाजिक अभियन्ता भनिने सृजना वाग्ले बीच लक्ष्मी गदालकै कोठामा गएर हाना’हान चलेको छ।सृजना वाग्लेले आफूलाई त’था’नाम आरोप लगाएर ब’इ’ज्ज’त गरेकोले लक्ष्मी गदाललाई समाजबाट निकाल्नु पर्छ भन्दै आक्रोशि’त भएर उनको कोठामा ज’बर्जस्ति ढोका ठेल्दै गएकी थिइन् भने लक्ष्मी
गदाल पनि रिसले आक्रो’शित बन्दै घरबेटीलाई गु’हार्न आग्रह गर्दै थिइन्।लक्ष्मी गदालले आफूलाई बेहुलीको नाटक गर्न लगाइ भद्रकाली मन्दिरमा लगेको आ’रो’प लगाउँदै सृजना वाग्लेलाई सुन्नै नसकिने माक्ने, रण्डी जस्ता शब्दले गाली गरेकी थिइन्। त्यसपछि लक्ष्मी गदालको कोठामै छि’रेर लक्ष्मी गदाललाई हा’त’पा’त समेत गरेकी छिन्।
आफले दस लाख लिने योजना बनाएको कुरा सम्पूर्ण रुपमा झुठो हो।यसको लागि मैले वकिल,प्रहरी प्रशा’सन धेरै ठाउँमा गएँ तर अहिले आएर मलाई सामाजिक रुपमा बदन’म गरि भन्दै आक्रो’श समेत पोखेकी छन् । यहि बिषयमा एकजना युवतीले कडा रुपमा आफ्नो कुरा राखेकि छिन ।
११२ वटा मोबाइल ६ हजार थान क्यालकुलेटरसहित २ जना पक्राउ !
मौसम झनै जटिल : सचेत रहन भन्दै पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गर्यो यस्तो सूचना !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मिर्गौला दिने समीक्षा संग्रौलालाई निमोनिया भएको आशंका !
जाडोमा आगो बालेर अध्ययन गर्दै !
विकासले जब ट्राफिकले जरिवाना तिराएपछि रिसाएर मोटरसाइकलमा आगो लगाइदिए !
म बाँच्नुत अब के का लागि ? सडकछाप भनेर चिनिए – सपना रोका मगर
विद्युत् खेर जाँने भन्दै , विद्युतीय चुल्होको प्रवर्द्धन गर्दै
भारतबाट हुने उडान संख्या घटाउने अष्ट्रेलियाको निर्णय !
बुजिलीको लाइन काटेर कारबाही नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन !